NUBU - Adeegyada qoysaska - pmto.no
Halkan ayaad joogtaa: Bogga hore / Adeegyada qoysaska / NUBU
The Norwegian Center for Child Behavioral Development (NUBU) waa shirkad hoos timaada UniRand AS, oo ay milkayadeeda iska leedahay Jaamacadda Oslo.
Xaruunta waxay ka shaqeysaa su'aalaha la xiriira caruurta iyo dhallinyada qabta dhibaatooyinka waaweyn la xiriira habdhaqankooda.
Maxay qabataa xaruunta NUBU?
Xaruuntu waxa ay ka qaybqaadataa in carruurta iyo dhallinyarada qabta dhibbaatooyinka waaweyn la xiriira habdhaqankooda, qoysaskooda, dugsiyada iyo xannaanooyinka carruurtu ay helaan caawimaad. Caawimaadda waa in ay ahaataa mid ku saleysan cilmi-baaris, mid shakhsi kasta baahidiisa loo eegay, oo keenta natiijooyin miisaan leh isla markaana ay ay xiriir la leedahay heerka aqoonta ee hadda la joogo.
Tani waxaa ka mid ah:
Cilmi-baaris ku saabsan baaxadda iyo isbeddelka dhibaatooyinka la xiriira habdhaqanka carruurta iyo dhalinyarada.
Cilmi-baaris la xiriirta horumarinta iyo qiimeynta farsamooyinka cusub.
Hirgelinta farsamooyinka cusub.
Sii horumarinta farsamooyinka jira.
Wada-shaqeyn caalami ah.
Farsamooyin noocee ah ayaa NUBU laga adeegsadaa?
NUBU waxay isticmaashaa farsamooyin ay ujeeddadoodu tahay ka hortagidda ama daaweynta dhibaatooyinka la xiriira habdhaqanka ee carruurta iyo dhallinyarada.
Parent Management Training - Oregon (PMTO): Barnaamijyo daaweyn oo loogu talagalay waalidiinta haysata carruur da'dooda u dhaxeysa 3 ilaa 12 sannadood kuwaas oo qaba dhibaatooyinla la xiriira habdhaqanka oo halis ah.
Faragelinta waqtiga hore ee carruurta halista ku jirta (TIBIR): Barnaamij loogu talagalay ka hortaga iyo daaweynta dhibaatooyinka la xiriira habdhaqanka ee carruurta da'dooda u dhaxeysa 3 ilaa 12 sanno jir.
Daaweynta nidaamyada badan (MST): Daaweyn ku saleysan qoyska iyo jaaliyadda oo loogu talagalay dhallinyarada da'doodu u dhaxeyso 12-18 sanno jir kuwaas oo qaba dhibaatooyin waaweyn oo la xiriira habdhaqanka.
Daaweynta ka-qaybgelinta qoyska (FFT): Farsamo daaweyn ah oo loogu talagalay qoysaska leh dhallinyaro da'dooda u dhaxeysa 11-18 sannadood jir kuwaas oo muujinaya dhibaatooyin waaweyn oo la xiriira habdhaqanka.
Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC): Farsamo daaweyn ah oo ku saleysan hoy-korineed (fosterhjem) oo loogu talagalay dhallinyarada da'dooda u dhaxeysa 12-17 sanno jir kuwaas oo qaba dhibaatooyin waaweyn oo la xiriira habdhaqanka .
Habdhaqan togan (wacan), jawi taageero u ah waxbarashada iyo wadadhaqan (PALS): Qaab-dhismeed dugsiga oo dhan ah oo loogu talagalay xoojinta waxbarasha iyo bulshanimada carruurta, iyo ka hortagidda iyo maareynta dhibaatooyinka la xiriira habdhaqanka ee ka jira dugsiyada.
Halkeen ka heli karaa xog dheeraad ah oo ku saabsan NUBU?
Akhriso bogga internetka ee NUBU: www.nubu.no